Can Asians Think? (Continued) – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Can Asians Think? (Continued)
အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ တော်တော် မအားဘူးဆိုတာထက် အဆတစ်ထောင် ပိုလို့ မအားနိုင်အောင် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပို့(စ်)အသစ် မတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလည်း မအားတဲ့ ကြားက လှစ်ခနဲ လှည့်လို့ရတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ “အာရှသားတွေ စဉ်းစားတတ်ကဲ့လား”ကို ဆက်လက် ဖြည့်စွက်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ အသစ်မှာ ကြည့်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ရှေ့က တင်ထားခဲ့တဲ့ စာမျက်နှာမှာ ဆက်ဖတ်ရုံပါပဲ။ ညာဘက်ကော်လံက ဝေေ၀ဆာဆာ ဖတ်စရာ ခေါင်းစဉ်အောက်က Can Asians Think? (Part 1) ကိုသာ ပြန်ခေါ်ပြီး ဆက်လက်ဖတ်ရှုတော်မူနိုင်ကြကြောင်းပါ။
Author lettwebawPosted on 30 November 2009 17 February 2010 Categories Information
Previous Previous post: A New Page: Can Asians Think (Part 1)
Next Next post: Can Asians Think? (Full Text)